Halatr’omby :: Miaramila miisa telo namoahan’ ny Fitsarana didy fampitondrana • AoRaha
Halatr’omby Miaramila miisa telo namoahan’ ny Fitsarana didy fampitondrana
Namoahan’ny Fitsarana any Tsiroa­nomandidy didy fampitondrana laharana faha 021/Ccs/Ji19/C2 tamin’ ny 3 septambra lasa teo sy tamin’ny 1 oktobra teo ireo miaramila miisa telo miasa any Andranomadio-Tsiroano­mandidy. Manamboninahitra kapiteny ny iray amin’izy telo ireo. Voarohirohy tamin’ny halatr’omby miisa telopolo amby zato nitranga tany Manomboarivo-Bemahatazana tamin’ ny 19 mey 2019 izy ireo.
«Voatonontonona tamin’ io halatr’omby tany Manomboarivo io izy telo lahy. Nisy famotorana nataon’ny Zandarimaria dia nandefasana taratasy fiantsoana izy ireo saingy tsy mety tonga niatrika izany. Rehefa natolotra ny Fitsarana ny raharaha amin’ny maha heloka bevava azy dia namoahan’ny Fitsarana didy fampitondrana ireo miara­milan’ny Tafika”, hoy ny
loha­ranom-baovao avy any Tsiroanomandidy.
“Nanontany ny lehiben’ ny miaramila any Tsiroano­mandidy aho, fa nilaza ho tsy misy izany any an-toerana. Tsy mionona amin’izay ny Eta­mazaoro jeneralin’ny Tafika fa hampanao fanadi­hadiana haingana ahafantarana ny tena marina”, hoy ny jeneraly Rakotonirina Théophile, lehiben’ny Etamazaoro jeneralin’ny Tafika, omaly rehefa nanontaniana ity tranga ity. Hisy tompon’ andraikitra ambony avy amin’ny Tafika malagasy hidina any an-toerana hijery akaiky ity raharaha ity, sady hampivory ireo miaramila rehetra any an-toerana.
“Tsy aty Tsiroanomandidy intsony ireo olona namoahan’ny Fitsarana didy fampitondrana ireo”, araka ny loha­ranom-baovao hafa. Voalaza fa ankoatra ny halatr’omby dia isan’ny vesatra niampangana ireo miaramila miisa telo ny fanamparam-pahefana sy halatra kojakoja hafa, araka ny fanampim-baovao hatrany.
Fiatrehana ny fahavaratra – Nodiovin’ny Governora ny lakandrano etsy Besarety sy Andrahavoangy